IsaCloud POS System Best for Your Business? - Whoa POS
Service & Repair POS
Electronic & Mobile POS
September 18, 2019 By whoa_pos In news	No Comments
One of the main reasons you may look foracloud POS instead of an on-premise one is the lower cost.
Traditional, on-premise POS systems can cost hundreds if not thousands of dollars more than cloud systems.
For an entrepreneur, especiallyasmall business owner, this can beahuge blow. It has already been
estimated that the initial cost of startingabusiness from scratch is over $30,000, now add several
thousand dollars more to that, and you can see why many new business owners are choosing the cloud.
အဓိကတစ်ချက်အနေနဲ့ ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ POS သုံးတော့မယ်ဆိုရင် Off-Line နဲ့ Cloud Base တို့ရဲ့ ဈေးကွာဟမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန် Off-Line POS တစ်ခုရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဟာ သိန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျနိုင်ပေမဲ့ Cloud Base POS ကတော့ လစဉ်ကြေးအနဲငယ်လောက်နဲ့ သုံးစွဲပြီး မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်နိုင်လို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Cloud Base POS ရဲ့ အားသာချက် နောက်ထပ် အချက်အလက်တစ်ချို့ကို တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Instead ofalarge computer and monitor setup along with your other equipment to process transactions,
you have an iPad andafew peripherals likeacash drawer and credit card reader. There are no wires
running all over your floors. And your POS hardware will easily fit on most countertops.
Cloud Base POS ကိုအသုံးပြုရာမှာ နေရာဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပါတ်သက်ပြီးပြောရလျှင် နေရာကျယ်ဝန်းနေရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Off-Line POS လို ကွန်ပြူတာ၊ မော်နီတာ ထားသိုရန်နေရာများ၊ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ထားရန်နေရာများ အတွက် စဉ်းစားရန် မလိုတော့ပါ။ ထိုပစ္စည်းများအတွက် ဝါယာဆက်သွယ်မှုများကိုလည်း ရှုတ်ထွေးစွာ လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
A cloud POS is accessible from anywhere you have an internet connection, which gives you the power
to manage your business at home, on-the-go, or even when you’re on vacation. With an on-premise POS,
you’re limited to working from within your physical business.
အင်တာနက်ရရှိနိုင်သော မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည်
မိမိနေအိမ်မှဖြစ်စေ၊ မည်သည့် နေရာမျိုးတွင်ရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နေရာမျိုးသို့ ခရီးထွက်နေသည်ဖြစ်စေ
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် ဆက်သွယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ on-premise POS ကို အသုံးပြု ထား
ပါက တစ်နေရာတည်းမှာသာ အချိန်ပြည့်ထိုင်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
There’s no need for the customer to go to the register if the register can come to them. With
a cloud-based system, you can turnamobile device intoamobile POS. Purchases can be made anywhere
inside or outside your store (as long as you’re within WiFi range). This can be especially important for
a retail business, where customers’ satisfaction can be dependent on the ease of the transaction.
Cloud Base POS သည် နေရာတည်ရှိမှုကို အခြေမပြုတော့ပါ။ စားသုံးသူများသည် မိမိတို့ ဝယ်ယူလိုသော အရာများ
အတွက် ဆိုင်တည်နေရာသို့လာရောက်ရန်၊ တန်းစီရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ အင်တာနက်ရရှိသလောက် အဝန်းအဝိုင်း
အတွင်းမှနေ၍ ထိုင်ရာမထ လိုသမျှတို့ကို မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုအချက်သည် ဖောက်သည်များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို
ဖြစ်စေသည့် အခြေခံ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည့်အပြင် ကုန်အရောင်းဆိုင်များအတွက်လည်း အဓိက အလေးထားရမည့်
Due to the power of modern technology, cloud POS systems are updated far more frequently and easily than
on-premise systems. Not to mention that many traditional POS systems require you to buyanew license
if you want to get the latest version of their software. Withacloud POS, you will always have the latest updates,
making your system more powerful and more secure.
ပုံမှန်ရိုးရိုး on-premise POS ( Off-Line POS ) နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် Cloud Base POS တွေဟာ စွမ်းဆောင်မှုကောင်းပြီး ခောတ်မှီတဲ့ နည်းပညာရပ်များကို အသုံးပြုထားတာကြောင့် software လုပ်ဆောင်မှု နည်းစနစ်များကို အမြဲ အဆင့်မြှင့် လုပ်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန်ရိုးရိုး on-premise POS များလို အချိန်ကာလ အလိုက် လျှော်ညီတဲ့ version တွေကို ထပ်မံ ဝယ်ယူအသုံးပြုစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များစွာကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
With cloud POS systems, customer service is usually included in the monthly price of the software. The customer service team is almost always directly employed by the vendor, and support is often available 24/7. On-premise systems usually require an owner to pay extra for support. Normally you can choose fromafew different
support packages. For example, you might have the option to either getayear of support up front or pay for support on an hourly basis. The benefit of the latter scenario is that you only pay for the hours you use. In some instances, your customer support team might be employed byathird-party vendor likeaPOS system reseller.
Cloud Base POS တွေဟာ အနဲငယ်သော လစဉ်ကြေးသာ ပေးဆောင်ရသောစနစ်ဖြစ်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ ဝန်ဆောင်မှု ပါဝငိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ်ငန်းနှင့်ပါတ်သက်သော လုပ်ဆောင်ရမည့် ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးသည် လစဉ်ကြေးပေးဆောင်မှုတွင် ပါဝင်ပြီး ဖြစ်သည်။
သို့သော် On-premise systems ( Off-Line POS ) တွင်မူ ဝယ်ပြီးနောက် ထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအမျိုးအစား လုပ်ဆောင်မှု ပေါ်မူတည်၍ ဝန်ဆောင်စရိတ် ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
With an off-site data center housing your critical business data, it’s protected if anything happens to your
storefront likeafire, flood, or other accident.
On-premise systems ( Off-Line POS ) တွင်မူ မိမိ၏တည်နေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ရေဘေး၊ မီးဘေး၊ လျှပ်စစ်၊ စက်ပစ္စည်း ချို့ယွင်းမှု စသည့် အခြေအနေ မျိုးစုံထိခိုက်မှုစုံကြောင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ ပျက်စီးပြောက်ဆုံးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ Cloud Base POS ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက Off-Line POS ကဲ့သို့ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ ပျက်စီးပြောက်ဆုံးမှုမျိုး မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Cloud Base POS ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုတိုးတက် ခောတ်မီသော လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် အမြဲလိုက်ပါ စီးမျောနိုင်အောင် အလိုအလျှောက် ဝန်ဆောင်ပေးနေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် mobile, tablet စသည် တို့ဖြင့် ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပိုမိုချောမွှေ့စေသည့်အပြင် မိမိလုပ်ငန်းပုံရိပ်ကို ပိုမို မြင့်တက်ပေါ်လွင်စေမှဖြစ်ပါတယ်။
4 Reasons WhyaCloud-Based POS System Is Perfect For Your Business
© Whoa POS All Rights Reserved 2019 - Powered By iBiz Service Provider